» नेपाल आईडलमा किरण कुमार भुजेलका उत्कृष्ट ३ प्रस्तुतिहरु
नेपाल आईडलमा किरण कुमार भुजेलका उत्कृष्ट ३ प्रस्तुतिहरु
२१ भाद्र २०७७, आईतवार ०८:१४
चन्द्र घलान, मकवानपुर, २१ भदौ । नेपाल आईडल सिजन ३ का सेकेण्ड रनरअप किरण कुमार भुजेलले नेपाल आईडलको स्टेजमा चर्चित प्रस्तुतिहरु दिएका छन् । वाईल्ड कार्ड राउण्ड जितेर फाईनलसम्म पुगेका किरणले उत्कृष्ट प्रस्तुतिहरुकै आधारमा ४ वटा पर्फोमेन्स अफ द डे’ अवार्ड, एउटा रेस्पेक्ट पर्फोमेन्स अफ द विक अवार्ड र एउटा ग्लामर मोमेन्ट अफ द डे अवार्ड जितेका थिए । उनले वाईल्ड कार्ड राउण्ड सहित २ पटक सर्वाधिक भोट समेत प्राप्त गरेका थिए । नेपाल आईडलको स्टेजमा रियल पर्फोमरका रुपमा देखिएका किरणको मेलोडी र प्ले ब्याक सिंगिङको खुबीलाई निर्णायक र दर्शकहरुले निक्कै मनपराएका थिए । यस भिडियो सामग्रीमा किरणले नेपाल आईडलमा दिएका उत्कृष्ट ३ प्रस्तुतिहरुका बारेमा चर्चा गरिएको छ । यी प्रस्तुतिहरु नेपाल आईडलको युट्युब च्यानलबाट अपलोड भएपछि सर्वाधिक हेरिएको थियो । ती क्लिपहरुले पाएका सर्वाधिक भ्यूजका आधारमा किरणको ३ वटा भाईरल प्रस्तुतिहरु कुन कुन होलान् ? आउनुहोस् त्यसबारेमा यो काउनडाउन सुरु गरौँ । हेरौँ यो भिडियो–
नम्बर ३–आगे आगे तोपैको गोला–किरणको सर्वाधिक हेरिएका प्रस्तुतिहरुको तेस्रो नम्बरमा ‘आगे आगे तोपैको गोला’ बोलको गीत रहेको छ । डेनी डेङ्जोङ्पाको शब्द संगीतमा तयार भएको यो गीतको ओरिजिनल भर्सनमा डेनी र आसा भोस्लेको आवाज रहेको छ । यो प्रस्तुति किरणले प्रतियोगिताकी अर्की प्रतियोगी मुस्कान रानाभाटसँग मिलेर दिएका थिए । नेपाल आईडलको च्यानलमा १२ फेब्रुअरी २०२० मा अपलोड भएको यस प्रस्तुतिलाई यो सामग्री तयार पार्दाको समयमा ४ लाख २१ हजारभन्दा बढी पटक हेरिएको छ । प्रस्तुतिमा ५ हजार २ सयभन्दा बढी लाईक र करिब एक सय वटा कमेन्टहरु गरिएका छन् । यो प्रस्तुतिमा निर्णायकहरु सबैले स्टाण्डिङ अवेशन दिएका थिए ।
नम्बर २–तिमी मेरो राधा पियारी–किरणको सर्वाधिक हेरिएका प्रस्तुतिहरुको दोस्रो नम्बरमा ‘तिमी मेरो राधा पियारी’ बोलको गीत रहेको छ । चेतन कार्की र गोपाल योञ्जनको शब्द रहेको यस गीतमा गोपाल योञ्जनकै संगीत र आवाज रहेको छ । यो गीत स्टेजमा प्रस्तुत गर्दा किरण झिल्के अवतारमा देखिएका थिए । स्टेजमा सबैलाई नचाएका किरणले यस प्रस्तुतिबाट रेस्पेक्ट समेत पाएका थिए । यस गीतमा सबै निर्णायकहरुले स्टाण्डिङ अवेशन दिएका थिए । ४ मार्च २०२० मा युट्युबमार्फत सार्वजनिक भएको यस क्लिपलाई यो सामग्री तयार पार्दाको समयमा ५ लाख २ हजारभन्दा बढी पटक हेरिएको छ । यस क्लिपमा ८ हजार ९ सय लाईक र करिब २ सय कमेन्टहरु गरिएका छन् ।
नम्बर १–फनफनी–किरणको सर्वाधिक हेरिएका प्रस्तुतिहरुको पहिलो नम्बरमा ‘फनफनी’ बोलको गीत रहेको छ । किरणले यो गीत नेपाल आईडल सिजन ३ की विजेता सज्जा चौलागाईसँग प्रस्तुत गरेका थिए । नेपाली चलचित्र ‘सेन्टी भाईरस’ मा समावेश यस गीतमा डिपि खनालको शब्द र शंकर थापा स्माईलको संगीत रहेको छ । गीतमा ओरिजिनल आवाज मेलिना राई र कालिप्रसाद बास्कोटाको रहेको छ । किरण र सज्जाको यो प्रस्तुतिको क्लिपलाई नेपाल आईडलले १२ फेब्रुअरी २०२० मा युट्युब मार्फत सार्वजनिक गरेको थियो । यो सामग्री तयार पार्दाको समयमा यस क्लिपलाई ६ लाख २२ हजारभन्दा बढी पटक हेरिएको छ । भिडियोमा ८ हजार ९ सय लाईक र २ सयभन्दा बढी कमेन्टहरु गरिएका छन् । यस प्रस्तुतिमा पनि निर्णायकहरुले स्टाण्डिङ अवेशन दिएका थिए ।
अडिसन राउण्डदेखि नै चर्चामा रहेका किरणले स्कुले जिवनदेखि नै गाउन सुरु गरेका हुन् । कक्षा ६ मा अध्ययन गर्दाको समयमा उनले गीत गाउन सुरु गरेका थिए । दाईले गाएको देखेर दाईकै नक्कल गर्दै गीत गाउन थालेका किरण वि.सं. २०६५ सालमा एसएलसी सकाएपछि काठमाडौँ प्रवेश गरेका थिए । काठमाडौँमा आएर सँगीत विषय अध्ययन गरेका किरणले ललितकला क्याम्पसबाट संगितको औपचारिक शिक्षा लिएका छन् । संगितमा नै स्नातक गरेका किरणले वि.सं. २०६५ सालतिर पहिलो पटक आफ्नै गीत निकालेका थिए । उनी अहिले जे ब्याण्डमा आवद्ध छन् । उनका विभिन्न गीतहरु चर्चामा छन् ।आदरणिय दर्शकविन्द तपाईलाई किरण कुमार भुजेलका कुन कुन प्रस्तुतिहरु सर्वाधिक राम्रो लाग्यो ? कृपया कमेन्ट गर्नुहोस् । यस्तै भिडियोहरुका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राईब गर्नुहोस् ।